Interesting Archives - 24 News Press
Posted By: 24 News Presson: February 09, 2020
काठमाडौं: लोकप्रिय भिडियो शेयरिङ एप टिकटक त तपाईंले प्रयोग गर्नुभएकै होला । तपाईमध्ये धेरैजसोको फोनमा यो एप्लिकेसन रहेको छ । नेपालमा पनि टिकटक निकै प्रचलित छ । टिकटककै कारण कतिपयले आफ्नो प्रतिभा निखार्ने मौका पाएका छन् भने कतिपयको समय बर्बाद पनि भइरहेको छ ।
टिकटकले कति कमाउला त ? यसको जवाफ सुन्नुभयो भने तपाईंले पक्कै जिब्रो टोक्नुहुने छ । टिकटकले सन् २०१९ को अन्तिम तीन महिनामा कम्पनीको इतिहासकै सबभन्दा बढी नाफा कमाएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगको विश्लेषण गर्ने संस्था सेन्सरटावरका र्‍यान्डी नेल्सनले बताएअनुसार, टिकटकले पछिल्लो त्रैमासिकमा ८ करोड ७० लाख डलर नाफा कमाएको छ । एप स्टोर र गूगल प्लेलाई ६ करोड पैसा बुझाएपछि टिकटकले २ करोड खुद नाफा कमाएको हो ।
यो चीनबाहेक टिकटक चल्ने अन्य सबै मुलुकबाट आएको नाफा हो । सन् २०१८ को त्यही अवधिको नाफाका तुलनामा टिकटकले सन् २०१९ मा ५२१ प्रतिशत नाफा कमाएको नेल्सनले जानकारी दिए । सार्वजनिक गरिएको जम्मा दुई वर्षमा टिकटक अमेरिकामा सबभन्दा बढी डाउनलोड गरिने एप बन्यो । सन् २०१९ मा टिकटक ७५ करोडपटक डाउनलोड गरियो ।
टिकटकमा प्रयोगकर्ताहरूले साना संगीतबद्ध भिडियो रेकर्ड गरेर शेयर गर्न पाउँछन् । अघिल्लो साता अमेरिकी सेनाले सबै सरकारी डिभाइसमा टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइने किनकि यो बनाउने कम्पनी बाइटडान्सले डेटा संकलन गरेर चिनियाँ सरकारलाई बुझाउने गरेको बताएको थियो ।
अनि गत अप्रिल महिनामा यौन दुराचारीहरूले नौ वर्षे बालबालिकालाई समेत यौनसम्बन्धी सन्देश पठाउन टिकटक दुरुपयोग गर्ने गरेको रिपोर्ट आएको थियो । एजेन्सी
Posted By: 24 News Presson: February 06, 2020
नेपाल घुम्न लायक, राजदुत यान्छी
Posted By: 24 News Presson: December 31, 2019
काठमाडौँ: नेपाल भ्रमण बर्षको स्वागतमा चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले सफलताको शुभकामना दिएकी छन ।
सामाजिक संजाल ट्वीटरमार्फत राजदूत यान्छीले इतिहास, विविधता र प्रकृतिका कारण सुन्दर नेपाल घुम्न लायक रहेको उल्लेख गरेकी छन ।
नेपालले भ्रमणबर्ष २०२० को भव्य उदघाटन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० भोलीबाट सुरु हुँदैछ ।
Posted By: 24 News Presson: December 29, 2019
काठमाडौँ : ‘मिस मंगोल नेपाल २०१९’को ताज ताप्लेजुङकी २५ वर्षिया सिभिरा लामा बनेकी छन् । मिस ट्यालेन्ट र मिस पब्लिक च्वाइस उपाधि समेत हात पारेकी लामाले उपाधीका साथमा एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गरेकी छन् ।
रिडी ग्रुप लिमिटेडको शिर्ष प्रायोजक रहेको प्रतियोगितामा रोल्पाकी २२ वर्षीया रेनुका पुन फस्ट रनरअपसहित मिस मंगोल स्टेट ५ को उपाधि हात पर्दा काठमाडौंकी १९ वर्षिया यजु कर्माचार्य सेकेन्ड रनरअप हुन सफल भइन् ।
कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आयोजित प्रतियोगितामा ग्ल्यामर फोटोग्राफर राजभाई सुवाल, हेयर स्टाइलिस निलडेभिड कटवाल र कोरियोग्राफर रोजिन शाक्यलाई ‘मिस मंगोल डिकेट कन्ट्रिब्युसन अनर’ प्रदान गरिएको थियो ।
खुसीको खबर, नेपालले जित्यो मिस वर्ल्ड को मल्टी मिडिया अवार्ड, मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठलाई
लन्डन ,नेपालले मिस वर्ल्डको मल्टी मिडिया अवार्ड जितेको छ । हेड टु हेड च्यालेन्जको दोस्रो चरण पार गर्दै बिउटी वीथ पर्पोज विधामा पनि टप १० पुगेको नेपालले मल्टी मिडिया अवार्ड जितेको हो । । मिस वल्र्डमा नेपालसहित विश्वभरिका करिव १ सय २५ देशका सुन्दरीहरु सहभागि छन् । मिस वल्डको फाइनल प्रतिस्पर्धा यही डिसेम्बर १४ तारिखमा हुँदैछ ।
कसले दियो ३० लाखको गाडी उपहार ?
Posted By: 24 News Presson: November 02, 2019
काठमाडौँ, १६ कार्तिक । बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमलाई ‘मुम्बई सागा’का निर्देशक संजय गुप्ताले ३० लाख भारू बराबरको एक पिकअप ट्रक उपहार दिएका छन्।
जोन बाइक र गाडीका सौखिन भएकाले सोही कुरालाई ध्यानमा राख्दै ‘मुम्बई सागा’का निर्देशक गुप्ताले ३० लाख भारू बराबरकोइसुजु डिम्याक्सको पिकअप ट्रक उपहार दिएका हुन् ।
संजयले जोनको कामबाट प्रभावित भएर यो गाडी उपहार दिएका हुन् । उनले भनेका छन, ‘मैले बाइक र कारको मामिलामा जोन जस्तो मान्छे देखेको छैन । उसँग कार र बाइकको राम्रो संग्रह छ । मैले उसको लागि पिकअप ट्रक किने किनकी यो उनको संग्रहमा छैन । यसको परिक्षण पनि हामीले साथमा गरेका थियौं र मलाई यसलाई उनले कति मनपराए भन्ने महसुस भयो ।’
एम्मी अवार्डमा कुन विधामा कसले जिते अवार्ड?
काठमाडौं । टेलिभिजन क्षेत्रमा सबैभन्दा सम्मानित एम्मी अवार्डमा यो वर्ष गेम अफ थ्रोनको अन्तिम सिजनले स्ट्याण्डिङ अवेसन पाएको छ । तर अवार्डहरु भने अपेक्षाकृत रुपमा पाउन सकेन ।
गेम अफ थ्रोनले सर्वोत्कृष्ट ड्रामा सिरिज तथा सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेताको अवार्ड जित्न सफल भयो । यो वर्षको एम्मी अवार्डमा फ्लीब्याग र चर्निबलले बढी अवार्ड जिते । अमेरिकाको लस एन्जलसमा नेपाली समय अनुसार सोमबार बिहान भएको विशेष समारोहमा अवार्ड वितरण गरिएको हो ।
सर्वोत्कृष्ट ड्रामा सिरिजः गेम अफ थ्रोन
सर्वोत्कृष्ट कमेडी सिरिजः फ्लीब्याग
सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (ड्रामा सिरिज): बिली पोर्टर (पोज)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेतृ (ड्रामा सिरिज): जोडी कोमर (किलिङ एभ)
सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेता (ड्रामा सिरिज): पिटर डिङ्क्लेज (गेम अफ थ्रोन)
सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेतृ (ड्रामा सिरिज): जुलिया गार्नर (ओजार्क)
सर्वोत्कृष्ट निर्देशक (ड्रामा सिरिज): ज्यासन ब्याट्म्यान (ओजार्क)
सर्वोत्कृष्ट लेखक (ड्रामा सिरिज): जेसी आर्मस्ट्रोङ (सग्सेसन–नोबडी इज एभर मिसिङ्ग)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (कमेडी सिरिज): बिल हाडर (ब्यारी)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेतृ (कमेडी सिरिज): फोइब वालर–ब्रिज (फ्लीब्याग)
सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेता (कमेडी सिरिज): टोनी शाल्होब (द मार्वेलस मिसेज माइजल)
सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेतृ (कमेडी सिरिज): एलेक्स बोर्स्टीन (द मार्वेलस मिसेज माइजल)
सर्वोत्कृष्ट निर्देशक (कमेडी सिरिज): ह्यारी ब्राडबीयर (फ्लीब्याग–एपिसोड एक)
सर्वोत्कृष्ट लेखक (कमेडी सिरिज): फोइब वालर–ब्रिज (फ्लीब्याग–एपिसोड एक)
सर्वोत्कृष्ट टेलिभिजन चलचित्रः बान्डर्स्न्याच
सर्वोत्कृष्ट लिमिटेड सिरिजः चर्निबल
सर्वोत्कृष्ट अभिनेता (लिमिटेड सिरिज अर मुभी): जारल जिरोम (ह्वेन दे सी अस)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेतृ (लिमिटेड सिरिज अर मुभी): मिशेल विलियम्स (फोस/वेर्डन)
सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेता (लिमिटेड सिरिज अर मुभी): बेन वीशव (अ भेरी इंग्लिस स्क्याण्डल)
सर्वोत्कृष्ट सहअभिनेतृ (लिमिटेड सिरिज अर मुभी): प्याट्रिसिया अर्क्वेटी (द याक्ट)
सर्वोत्कृष्ट निर्देशक (लिमिटेड सिरिज, मुभी अर ड्रामेटिक स्पेसल): जोन रेन्क (चर्निबल)
सर्वोत्कृष्ट लेखन (लिमिटेड सिरिज, मुभी अर ड्रामेटिक स्पेसल): क्रेग माजिन (चर्निबल)
सर्वोत्कृष्ट प्रतिस्पर्धात्मक रियालिटी सिरिजः रुपल्स ड्रेग रेस
सर्वोत्कृष्ट वेराइटी टक सिरिजः लास्ट वीक टूनाइट विथ जोन ओलिभर
सर्वोत्कृष्ट वेराइटी स्केच सिरिजः स्याटरडे नाइट लाइभ
सर्वोत्कृष्ट निर्देशक (वेराइटी सिरिज): डन रोय किङ्ग (स्याटरडे नाइट लाइभ, होस्टः एडम सान्डलर)
सर्वोत्कृष्ट लेखन (वेराइटी सिरिज): लास्ट वीक टूनाइट विथ जोन ओलिभर